Safidy : “Nisy ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana” | NewsMada
Safidy : “Nisy ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana”
Nanao tatitra savaranonandro ny fanaraha-maso ho an’ny fifidianan ben’ny Tanàna sy mpanolontsaina farany teo ny eo anivon’ny Safidy. Nohitrikitrihin’izy ireo ny fihoaram-pefy sasany niseho.
“Amin’ny ankapobeny, nizotra tamim-pilaminana ny fifidianana kaominaly, ny 27 novambra lasa teo, na teo aza ny korontana hita teny anivon’ny biraom-pifidianana sasantsasany”, hoy ny fanambaran’ny mpanara-maso fifidianana Safidy, teny Ambatonakanga, ny faran’ny herinandro teo.
Teo, ohatra, ny tsy fahafehezan’ireo mpikamban’ny biraom-pifidianana ny fomba fiasa, ny tsy fahampiana na tsy fahatomombanan’ny fitaovam-pifidianana. Nahasorena ny mpifidy nandray anjara tamin’ny fifidianana solombavambahoaka ny tsy fahazoana nifidy tamin’ny fifidianana kaominaly noho ny tsy fahitana ny anarany tao anaty lisi-pifidianana.
Teo koa ny fitokanana zava-bita nandritra ny fampielezan-kevitra, ny fandraisana anjaran’ireo tompon’andraiki-panjakana ambony tamin’ny fampielezan-kevitra. Maro ireo mpisehatra amin’ny fifidianana nanaraotra tamin’ny fampiasana ny fahefana sy ny fitaovam-panjakana noho ny tsy fisian’ny lalàna mifehy ny vanimpotoana mialoha ny fampielezan-kevitra.
Hatrany amin’ny fampielezan-kevitra ny tsy fanarahan-dalàna
Nahitana kandida nametraka peta-drindrina ivelan’ny toerana voatondron’ny lalàna ny 9,26% amin’ny kaominina, araka ny fanaraha-maso nataon’ny Safidy. Nahitana fifandranitana teo amin’ny mpifaninana ny 7,25%. Nahitana fifanaratsiana imasom-bahoaka ny 8,19%, na tamin’ny haino aman-jery izay nisy 2,68%.
Hita tamin’ny kaominina 4,30% fa nisy ireo kandida tsy nanao fampielezan-kevitra. Nahitana fandraisana anjaran’ireo mpiasam-panjakana tamin’ny fampielezan-kevitra teo amin’ny 17,58% amin’ny kaominina. dia Hita teo amin’ny 17,32% amin’ny kaominina narahi-maso ny fikasana handresy lahatra ny mpifidy tamin’ny alalan’ny fizaram-bola, raha 30,47% ny nahitana fizarana zavatra.